/blog/Gallery/Tilmaamaha Iibsashada Dhamaystiran ee SARM SR9009 Jir-dhiska
Posted on 10 / 14 / 2019 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
1.Waa Maxay SR9009?
SR9009 ama stenabolic waa CAS 1379686-29-9 dheeri ah oo ka dhigeysa saameynta jimicsiga wadnaha. Kaliya daawadu kaa caawin mayso inaad hoos u dhigto qaar ka mid ah dufanka jirkaaga badan, laakiin waxay sidoo kale kor u qaadi doontaa istaandarkaaga iyadoo la kordhinayo dulqaadka.
SR9009 waa xarun isku-dhafan, oo ku timid jiritaanka asxaabta Professor Thomas Burris. Waxay si dhow ula xiriirtaa SARMS (Modulators Selective Androgen Receptor Modulators), laakiin waa mid isku buuqsan borotiinka Rev-Erbα ee laga helo muruqyada lafaha, unugyada adipose, maskaxda, iyo beerka.
Professor Burris ayaa la yimid SR9009 (1379686-29-9), isaga oo damacsan in uu wax barto oo fahmo laxanka.
2.How sidee buu u shaqeeyaa SR9009?
Ma ogtahay dareenka aad helaysid ka dib markii aad ku ordayso 2km taayil tusaya ama kor u qaadaya xoogaa culus. Hagaag, SR9009 daroogada oo miisaankiisu hoos wuxuu kaa dhigi doonaa inaad dareento isla dareenkaaga. Kordhinta waxay door ku leedahay isbadalka ku saabsan circaden, sharciyeynta nafaqada, iyo xakamaynta heerarka gulukooska.
SR9009 SARM ayaa door muhiim ah ka ciyaaray kicinta Rev-Erb. Borotiinkani wuxuu saameeyaa awoodda jirku u leeyahay inuu gubo dufanka, sonkorta, iyo kolestaroolka xun. Sidaa darteed, waxay kor u qaadeysaa habka miisaanka luminta iyadoo la hagaajinayo adkeysiga. Xitaa haddii aad jimicsi samaynaysay, waxaad dareemi lahayd tamar iyo daal aad u yar taas oo ah inaad sameyn karto tababar jimicsi oo dheeraad ah.
Stenabolic wuxuu dheef-shiidaayaa dufanka, dufanka, iyo sonkorta. Marka isticmaalka shidaalka ee jirku yahay kan ugufiican, markaa shaki la'aan waad gaari doontaa waxqabadka ugu sarreeya. Daraasad horudhac ah iyadoo la adeegsanayo moodooyinka murunka, jiirka ka hooseeya SR9009 budada (1379686-30-2) qiyaasta waxay ka shaqeyn kartaa laba jeer ka dhakhso badan sidii hore. Caddeyntan waxay noqon kartaa sababta stenabolic loogu taxay liiska daawooyinka mamnuuc ka ah ciyaaraha fudud.
Haddii aadan ahayn qof waalan oo jimicsi ah, warkan ayaa ah waxa ay dhegahaagu jecelyihiin inay maqlaan. Stenabolic sidoo kale wuxuu labalaabaa heerkaaga dheef-shiid kiimikaadka intaad nasaneysid. Cunista kadib, jirkaaga ayaa caadiyan cuntada u roga dufan. Si kastaba ha noqotee, SR9009 miisaan lumis dheeri ah ayaa isla markiiba kor u qaadi doona dheef-shiid kiimikaadka sida aad u bilaabi doonto gubida dufanka isla markiiba.
Daraasadihii ugu dambeeyay waxay muujinayaan in 'stenabolic' uu yahay wakiilka ka hortagga kansarka. SR9009 antagonist kansarka ayaa saameeya darawalada oncogenic, oo ay ku jiraan PIK3CA, HRAS, iyo BRAF. Unugyada khatarta leh, sheygu wuxuu keenaa apoptosis wuxuuna curyaamiyaa koritaanka burooyinka isagoo aan keenin saameyn xun.
3.How Loo Isticmaalo SR9009
Ka sokow isticmaalka sumadda ee isticmaalka muruqa 'SR9009' daroogada, kaabista waxay leedahay qiimeyaal daawo oo muhiim ah. Takhaatiirta caafimaadku waxay aad ugula talin lahaayeen bukaanka sonkorowga qaba iyo dadka u nugul istaroogga.
Haddii aad qorsheyneyso inaad maamusho budada SR9009 (1379686-30-2) si aad u maareyso xanuunkaaga, hubi inaad lahadasho dhakhtarkaaga kahor. Daawada waa amaan, laakiin takhtarkaagu waa inuu kugula taliyo daawooyinka jira inta aad lasocoto wixii astaamo xun leh.
Isticmaalka calaamadda dansan, qiyaasta caadiga ah ee loo yaqaan 'SR9009 dose' waa qiyaastii 30mg / day. Qiyaasta ayaa loo qaybiyaa saddex.
Haddii aad adkaysato dulqaadashada ka dib, waa inaad qaadataa kaabista wax yar ka hor intaadan garaacin goobta jimicsiga. Sababta ayaa ah in SR9009 uu leeyahay nolol-nus-gaaban; sidaa darteed, saameyntu waxay ka muuqataa toosh. Sida habboon, u maaree cuntada ka hor si aad u ilaalin karto dheef-shiid kiimikaad sarreeya maalinta oo dhan.
4.B faa'iidooyinka SR9009, Maxaad Ka fileysaa?
Dhiirrigelinta Miisaanka Maansada
SR9009 SARM waxay hagaajineysaa howlaha dheef-shiid kiimikaadka. Marka la cuno qaadashada, stenabolic wuxuu barnaamijka u qorsheyn lahaa jirka si loo gubo kalooriyada xad-dhaafka ah halkii loo rogi lahaa dufanka. Kaliya ma ahan dheeriyuhu inuu dhexdhexaad ka dhigo hiddo-wadayaasha dufanka, laakiin sidoo kale wuxuu yareynayaa soo saaridda unugyada baruurta cusub ee beerka.
Hadafkaagu waa inaad lumiso culeyska jirka, iska hubi inaad ku darto nashaadaadka jirka howlahaaga. Ka shaqeynta, cunista, iyo qaadashada SR9009 pre workout supplement waxay kordhineysaa gubashada dufanka xad-dhaafka ah. Cilmi baaris ayaa tilmaamaysa in isticmaalka stenabolic uu hoos u dhigo aashitada dufanka leh iyo Plasma triglycerides ee ku foognaanta 23% iyo 12%, siday u kala horreeyaan.
Xaaladaha cayilan ee ku saabsan ka shaqeynta ama cunista cunnadu aysan ahayn ikhtiyaar, dhakhaatiirtu waxay u badan tahay inay qori doonaan kabitaankan.
Qorshaynta iyada oo loo marayo dib u eegista macaamiisha, hal isticmaale ayaa xaqiijiyay in budada SR9009 (1379686-30-2) waxay ka caawisay inay ka tagto rodolkeeda 17 saddex bilood gudahood.
Kordhintaani ma aha oo kaliya inay kordhiso culeyska muruqyada laakiin sidoo kale waxay hagaajisaa xooggeeda iyo waxqabadkeeda. Dareenka aad hesho ka dib markaad maamusho qiyaasta SR9009 wuxuu u dhigmaa kan culeyska.
Daawada waxay kicineysaa wax soo saar ballaaran oo mitochondria gudaha unugyada muruqyada, sidaa darteed waxay kordhineysaa dheef-shiid kiimikaadka. Unugyadaani waxay mas'uul ka yihiin soo saarida tamarta unugyada murqaha. Ka sokow, waxaa jiri doona kordhinta isticmaalka gulukooska iyo isticmaalka aashitada dufanka leh murqaha dhexdooda.
Xaalad ahaan, SR9009 waxay ka faa'iideysataa waayeelka ka cabanaya murqaha xumaada ama sarcopenia.
Waxay kordhisaa dulqaadka
Ciyaartoyda jimicsiga badankood ma seegi doonaan ka mid noqoshada daawada muruqyada SR9009 ee jirkooda dhiska. Waxaad sare u qaadi doontaa culeyska, waxaad ku ordi doontaa mashiinka treadmill-ka, ama waxaad sameyn doontaa jimicsi kasta adigoon dareemin daal ama madax-xanuun.
Kabka ayaa shaki la'aan ku qaadi doona waxqabadkaaga heer ka sarreeya sidii hore. Haddii aad u maleyneysay in faa'iidooyinkaan SR9009 ay khiyaamo ahaayeen, waa inaad su'aal ka qabtaa sababta hay'adda la dagaallanka daroogada ay si adag u mamnuuceyso u isticmaalkeeda ciyaaraha isboortiga.
Sida Thomas Burris, oo ah aasaasaha Stenabolic, uu yiri, daroogadu waxay kuu beddeleysaa orodyahan xilliyeed waqti dheer qaatay. Kaa lumaya tamarta ama adkeysiga xitaa markaad sameysid jimicsi xoog leh.
Haddii aad had iyo goor hurdo qabtid inta lagu jiro maalinta, stenabolic wuxuu noqon karaa dawadaada xigta. Daraasad rasmi ah, kaabista ayaa umuuqday inay wax ka badaleyso hurdada qaab dhismeedka dilalka. Saynisyahannada waxay arkeen in jiirarkani ay feejignaadaan inta lagu jiro maalinta, oo midkoodna uusan seexan karin. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad khayaameyso qormooyinkaaga wareegga si aad wax uga beddesho qaabka hurdadaada, SR9009 ayaa si farxad leh u sameyn doonta.
Waad ku mahadsan tahay nolosha nuska ah ee SR9009, saamaynta soo jeedku waxay noqon doontaa mid gaaban. Sidaa darteed, ma noqon doontid hurdo la'aan maalinta oo dhan.
Burbur Tissue (Fibrosis)
Cilmi baaristu waxay xaqiijineysaa in jiirarka qaba fibrosis beerka uu si buuxda uga soo kabsaday ka dib markii uu qaatay SR9009 muddo laba toddobaad ah.
Waxay ka ilaalisaa Cudurka Wadnaha
Xaaladda halka wadnuhu si aan caadi ahayn u ballaadhiyo, budada SR9009 (1379686-30-2) waxay u shaqaysaa si ay u weeciso anomaly-ka iyadoo la yareynayo cabirka xubnaha iyo culeyska. Markii qaar ka mid ah jiirarka xididdada adkaaday lagu daaweeyo xanuunka loo yaqaan 'stenabolic', cilmi-baarayaashu waxay xustay inay yaraatay baaxadda nabarradii xididdada dhiigga ee toddobaad kadib.
Isticmaalayaasha qaarkood waxay qirayaan in kaabista ay door muhiim ah ka ciyaareen yareynta cadaadiska dhiigooda.
Waxay yareyneysaa kolesteroolka dhiiga
Haddii aad cayil tahay, fursadaha ayaa ah in heerarka kolestaroolkaagu aad u sarreeyaan. SR9009 wuxuu yareyn doonaa ilaa 47% ee LDL, sidaas darteed ka dhigaysa jimicsigaagu inuu noqdo mid wax soo saar leh. Waa inaad ogaataa in siyaadada aysan saameyn ku laheyn heerarka HDL.
Hoos udhaca Caabuqa
Rev-Erbs waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa hagaajinta caabuqa iyo dhaawaca ka dhaca CNS dhexdeeda. SR9009 waxay kicineysaa soo-dhoweyaasha nukliyeerka ee Rev-Erbα, kuwaas oo leh saameyn anti-bararka.
Daawadu waxay xakameyneysaa soo saarista molecules-ka ku dhaca sida CCL2, MMP-9, iyo TNF-α. Maaddaama burburka unugyada iyo caabuqa joogtada ah ay yihiin arrimaha oncogenic, saynisyahannada waxay daraasad ku sameynayaan rajada SR9009 kansarka antagonist ee ku dhaca dareeraha 'oncogene-induced senescence'.
Waxay yareysaa walaaca
SR9009 wuxuu yareeyaa walaaca ee moodooyinka jiirka.
Haddii aad qabtid isku-xidhka'panpanophobia ', war fiican ayaa kuu jira adiga. Hagaag, SR9009 ayaa diyaar u ah maamulka afka. Ma jirto duritaanno xanuun badan oo xanuun leh, sida la mid ah kuwa daroogada gubta badankood.
5.Half Nolosha SR9009
SR9009-nus-nolosha waa gaaban tahay afar saacadood. Sababtaas awgeed, waa inaad u kala qaadataa qiyaastaada afarta saacadood si aad u xasiliso bioavailability daroogada ee dhiiga.
6.SR9009 Qiyaasta iyo Baaskiil wadista
Qiyaasta SR9009 waxay kuxirantahay dhowr arrimood. Taasi waa, waxa aad jeceshahay inaad ku guuleysato iyo haddii aad ku darayso waxyaabo kale oo dheeri ah wareeggaaga. Ka sokow, qaddarka rijeetada ayaa sidoo kale ku xiran sida jidhkaagu u dhaqmo.
Qiyaasta qiyaasta celceliska waa 30mg maalin kasta, oo aad ugu kala qaybin karto saddex qiyaasood oo kala duwan. Farshax ahaan, dawadan ayaa macnaheedu yahay inaad maamusho kiniinka ka hor intaadan qaadan mid ka mid ah saddexdaada cunto ee laba jibbaaran. Bedelkeeda, waad isticmaali kartaa kabitaanka afartii saacadoodba mar.
Waqtiga intiisa badan, kala shaandheynta budada SR9009 (1379686-30-2) qiyaasta xiisaha hore waxay noqon kartaa mid xanaaq badan, gaar ahaan adeegsadayaasha daciifka ah. Kumaa xitaa daroogada u qaadan kara muddo afar saacadood gudahood ah isaga oo aan wax xanaaq ah samayn? Marka, haddii aadan ku qanacsaneyn jadwalka qaadashada, waxaad xallin kartaa inaad u isticmaasho saacad ka hor intaadan sameyn jimicsi jir ahaaneed.
Wareegga SR9009 wuxuu socdaa inta u dhexeysa sideed ilaa laba iyo toban toddobaad. Maaddaama ay jiraan rajo laga qabo in loo dulqaato daroogada, waxay ku habboon tahay qaadashada usbuuc-8-toddobaad.
Dawadani ma saameynayso beerka ama kelyaha. Si kastaba ha noqotee, waad difaaci kartaa xubnahaas adoo ku daraya kaabayaal kale oo muhiim ah oo ilaalin ah sida N2Guard meertadaada 'SR9009'.
7.Do miyaad ugu baahantahay PCT ee SR9009?
Si ka duwan kaabisyada kale, stenabolic uma baahna PCT (Daaweynta Wareegtada Kadib) maadaama daroogadu aysan faragelin heerarka testosterone.
8. Saamaynta Dhinacyada Dhibaatada Adag iyo Halista ee Adeegsiga SR9009
Calaamadaha kor ku xusan waxay badanaa saameyn ku yeelan doonaan kuwa bilowga ah. Mar alla markii jirkaagu la qabsado dheellitirka, astaamuhu way idlaanayaan. Si kastaba ha noqotee, haddii saameynta dhinaca ee SR9009 noqo wax kasii daran, waa inaad joojisaa oo aad takhtarkaaga la hadashaa.
SR9009 waxay u badan tahay inay ka sii xumeyso xaaladda ragga qaba libido hoose ama kacsi la'aan. Mararka qaarkood, kordhinta ayaa horseedda heerar testosterone oo hooseeya.
Stenabolic ma aha a steroid. Sidaa darteed, qaadashadiisu ma faragelineyso nidaamka hoormoonka. Heerarkaaga testosterone ma hoos u dhici doono, sidoo kale daroogadu aromatis ma noqon doonto estrogen. Dumarka, kaabista ayaan u horseedi doonin wareegga caadada oo aan caadi ahayn.
9.Stacking SR9009 leh SARM kale
Ku dhejinta SR9009 leh Ostarine (MK-2866) waxay gaari doontaa natiijooyin aan caadi ahayn, gaar ahaan qeybta dib u qaabaynta.
Ostarine, lafteeda, waa SARM aad u fiican labadaba bulukeetiga iyo jaridda wareegga. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto adkeysi ugu sareeya, waa inaad ku dhejisaa SR9009. Inta aad ku jirtid kaydka, hubi inaad isticmaasho 25mg oo ah ostarine maalin kasta. Wixii stenabolic ah, 10mg wuu shaqeyn doonaa, laakiin waa inaad qaadataa markii aad ku dhufanayso xarunta taam ahaanshaha.
SR9009 iyo GW501516 (Kaararin-isay) Wax isu eg. Daraasadaha qaar ayaa xitaa ku doodaya in labadan xeryood ay isku xidhan yihiin isla qaatayaasha.
Sidaad horeyba u ogayd, stenabolic wuxuu leeyahay nolol badhkeed oo dhaqso ah, oo aan ku sii socon doonin maalin dhan. Ka soo horjeedka, bioavailability-ka kaarine ayaa sii kordheysa ilaa 24 saacadood. Isku darka labadan waxay keeneysaa natiijo 24/7 ah.
Haddii aad isticmaaleyso SR9009 oo ay weheliso GW501516, waa inaad tixgelisaa kii hore sidii dheeri shaqo-horeyn ah. Micnaheedu waa, kaliya waa inaad maamushaa stenabolic maalmaha aad shaqeyneyso.
Markaad kujirto xariga 'SR9009', qiyaasta waa 10mg oo keliya, oo ay tahay inaad qaadato waxyar kahor intaadan shaqeynin. Wixii GW501516, rijeetada kuugu habboon waa 20mg / maalin, oo aad adigu maamuli doonto quraacdaada.
Suuqa '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''
Dib u eegisyo badan oo khadka tooska ah ee internetka ah, adeegsadayaashu waxay soo sheegeen in kabitaanku wanaajiyay adkeysi maadaama ay sameyn karaan layliyo adag adigoon dareemin daal. Qaarna, kororka adkaysiga iyo kor u qaadista tamarta ayaa heer sareeya isla markiiba maamulay budada SR9009 (1379686-30-2).
Dhinaca taban, qaar ka mid ah adeegsadayaashu may caloosha ka qaadin qaadashada soo noqnoqda afartii saacadoodba mar. Si kastaba ha noqotee, kuwa adeegsada joonyadaha 'SR9009' ma aysan helin tan inay tahay wax laga walwalo tan iyo markii ay kali ku ahayd inay qaataan dheeri inta ay ku sii jeedeen goobta jirdhiska.
Dhowr macmiil ayaa qirtay in stenabolic uusan iyaga dareensiinayn wax badan. Marka laga reebo hurdo la’aanta, qofna uma muuqan inuu iska diiwaangelinayo dhibaatooyinka soo raacaya ee SR9009.
11.Is SR9009 Biyo-La'aan?
Waxaa jiray fikrado sheegaya in SR9009 uusan lahayn wax bioavailability, gaar ahaan maamulka afka. Si kastaba ha noqotee, si kalsooni leh ayaan u diidi karaa tan maxaa yeelay haddii dheellitirka aan la heli karin, markaa ma jiri karto natiijooyin wanaagsan oo SR9009 ah oo ku saabsan jirka aadanaha.
12.W Halkee Iibtaa SR9009
Ganacsatada aan la tirin karin waxay iibinayaan SR9009 iibka. In kasta oo dukaamada qadka ah ay yihiin meesha ugu habboon ee lagu iibsado kaabista, haddana waa inaad aad uga taxaddartaa inaadan ku dhicin alaab been abuur ah.
Haddii aad rabto stenabolic-aadanaha heerka-sare, ka hel alaab-qeybiye sumcad leh. Waxaad ka dalban kartaa amar AASraw.
13.SR9009 Loogu talagalay Dhisidda Jirka
SR9009 budada (1379686-30-2) waxay ugaarsatay warshadaha jirdhiska markii cilmi baaris la xaqiijiyey in kaabista ay jiirarku qabaan muruqyada jilicsan. Ka sokow, waxay ahaayeen kuwo firfircoon, muujiyey waxqabad jireed oo aad u wanaagsan, oo iyagu ka xanaaq badnaa sidii hore.
Jir-dhiseyaasha jirka kadib markay wax dillaacaan ama jaraan waxay si buuxda uga faa'iideysan doonaan SR9009. Xaaladaha ay tahay inaad si adag u tababarto, daroogadu waxay kordhisaa garaaca wadnahaaga ugu sarreeya, taas oo xaddideysa madax-wareerka iyo daalka. Waxaa intaa dheer, SR9009 dheellitirka jirku wuxuu yareeyaa caabuqa iyo dhaawaca unugyada si hawsha soo kabashada ay u noqoto sida ugu dhakhsaha badan.
Kordhinta jir dhiska ee SR9009 waxay u shaqaysaa xoojinta waxqabadka. Ugu yaraan, waxaa jira tijaabooyin kufilan oo kufilan xaqiiqadan iyo dib u eegista isticmaale ee tirinteeda wanaagsan ee sheyga.
Si kastaba ha noqotee, waxtarka daawadani waxay laf-dhabar u ahayd saynisyahannada iyo cilmi-baarayaasha iyo saynisyahannada guud ahaan. Tusaale ahaan, waxaa jiray sheekoyin sheegaya in SR9009 bioavailability afka uu yahay eber. Hagaag, ma doonayo inaan ku dhaqmo u doodaha sheydaanka, laakiin 95% dadka isticmaala stenabolic waxay cadeynayaan waxtarkooda. Ka sokow, waa inaad su'aal ka keentaa sababta ururada ka hortagga daroogada ay u yeelan karaan neerfaha inay ka mamnuucaan adeegsiga ciyaaraha fudud markii walaxdu aysan waxtar lahayn.
Ogsoonow in natiijooyinka SR9009 ay yihiin kuwo la-hubo marka aad si joogto ah u shaqeyso adigoo sameeynaya cunno caafimaad leh. Ka fogow cuntooyinka dufanka leh, kalooriga, iyo ka fogaan sigaar cabista iyo cabbitaanka.
Cho, H., Zhao, X. et al. (2012). Shuruucda Habdhaqanka Circaden iyo Dheef-shiid kiimikaadka ee REV-ERBα iyo REV-ERBβ. Shaybaarka Qeexitaanka Gene, Machadka Salk ee Daraasaadka Bayoolajiga.
Morioka, N., Zhang, FF, Tomori, M., Hisaoka-Nakashima, K., Saeki, M., iyo Nakata, Y. (2016). Kicinta Nukliyeerka Nukliyeerka REV-ERBs Wuxuu Xukumaa Tumor Necrosis Feejignaanta-Muujinta Muuqda ee Molecules Pro-Inflammatory Molecules ee C6 unugyada Astroglial.
Thomes, PG, Brandon-Warner, E., et al. (2016). Rev-Erb Agonist iyo TGF-β Si la mid ah ayey u saameeyaan Autophagy laakiin si kala duwan ayey u xukumaan Hepatic Stellate Cell Fibrogenic Phenotype. Int J Biochem Cell Biol.
Dodson, B. (2013). Saamiyada cusub ee Daroogada ayaa ah Saamaynta Faa'iidada Leylika. Caafimaadka iyo Fayoobaanta.
Woldt, E., Sebti, Y. Et al. (2013). Rev-Erbα wuxuu wax ka beddelaa Astaamaha Murqaha Oxidative Akeeriyaanka isagoo dejinaya Mitochondrial Biogenesis iyo Autophagy. Journal of Medicine Dabiiciga ah.
Sulli, G., Rommel, A., et al. (2018). Firfircoonaanta daawada ee loo yaqaan 'REV-ERBs' waa mid halis ku ah kansarka iyo Dareenka 'Oncogene-Induced Senescence'. Dabeecadda (Journal Journal of Science).
Faahfaahin qoto dheer ee Cypionate Testosterone
Fikradaha khaldan ee sida caadiga ah looga helo steroids anabolic-ka adduunka	Wax kasta oo ku saabsan Oxandrolone (Anavar), waxaad u baahan tahay inaad ogaato